Ny Broadcasters dia afaka mamorona tantara an-tsary ara-pifandraisana bebe kokoa miaraka amin'ny studio Viz Virtual | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ny Broadcasters dia afaka mamorona tantara an-tsary ara-pahitana bebe kokoa amin'ny studio Vizika Vizika
Ny Broadcasters dia afaka mamorona tantara an-tsary ara-pahitana bebe kokoa amin'ny studio Vizika Vizika
Raha mpamorona votoaty miasa amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo ianao, dia tsy mahagaga raha milaza ny maha-zava-dehibe ny marikao sy ny mpihaino izaranao azy. Ny mpamorona atiny rehetra amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo dia manana tantara hotantaraina, ary ny atiny hita maso noforonin'izy ireo no fiara tonga lafatra amin'ny fizarana an'io traikefa io amin'ny mpihaino kendrena. Ahoana anefa raha misy mpampita onjam-peo iray mahasarika ny mpihaino azy ireo? Ahoana raha afaka mamelona azy io bebe kokoa izy ireo? Eny, teo Vizrt tonga eo amin'ny sary sy ny Virtual Studio no fitaovana tonga lafatra amin'ny fanaovana traikefa ara-tantara amin'ny tantaran'izy ireo izay tena zava-dehibe ho an'ny mpihaino azy.
Koa satria 1997 Vizrt (Visualisation en Real-Time) no mpamatsy fitaovam-pitaterana an-tsary mitarika izao tontolo izao ho an'ireo mpamorona ny votoatin'ny haino aman-jery amin'ny indostrian'ny fampitana, fanatanjahantena, nomerika ary esports. Ny orinasa dia manolotra vahaolana mifototra amin'ny famaritana lozisialy ho an'ny sary grika 3D, horonan-tsarimihetsika video, famokarana studio, famakafakana fanatanjahan-tena, fitantanana ny fananana media ary fitaovana momba ny mpanao gazety. Ireo tantara notantarain'ny Vizrt ny mpanjifany isan'andro dia mahatratra olona telo tapitrisa tapitrisa, ary ao anatin'izany ny orinasam-baovao toy ny CNN, CBS, NBC, Fox, BBC, BSkyB, Sky Sports, Al Jazeera, NDR, ZDF, Star TV, Network 18, Tencent, sy ny maro hafa.
Viz Engine, Viz Virtual Studio no fenitra eran'izao tontolo izao sy manova vaovao ho an'ny virtoaly virtoaly sy famokarana zava-misy marina. Ny seho virtoaly (VS) sy ny zava-misy marina (AR) no lohalaharana Virtz ny fanavaozana, izay mitohy hatrany rehefa manao izay takin'ny mety ho azo. Virtz manatanteraka izany amin'ny alàlan'ny fitambaran-jotra ho an'ny mpanao gazety ho an'ny mpanao gazety, fampidirana amin'ireo rafitra fanandramana mandroso, ary ny serivisy misy ilay milina fanatanjahan-tena mahery vaika indrindra eran'izao tontolo izao.
The Viz Virtual Studio omen'ny mpamokatra ny hery tsy voafetra amin'ny fitantarana tantara, na inona na inona ny haben'ny studio. Ny studio Virtual dia mamela ny mpamokatra hamorona sanganasa madinidinika, ifotony, 3D virtoaly, fakana sary zava-misy marina ary fampisehoana zava-misy mifangaro ho an'ny famokarana rehetra. Ary raha miresaka tantara saro-bahana izy ireo, ny virtoaly virtoaly sy ny sary tena zava-misy dia lasa fitaovana sarobidy ho an'ny mpanolotra sy ny fahaizany manamboatra ireo tantara ireo ho mora kokoa amin'ny mpijery. Izany dia mamela ny fampitomboana ny tsy fivadihana amin'ny fandaharana sy ny fanamarinana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo singa manaitra, na eo alohan'ny sy eo alohan'ny mpanolotra. Ny mpanolotra ihany koa dia omena fahafahana handehanana amin'ny habaka 3D rehefa mifindra miaraka aminy ny fakantsary ary mifandray amina takelaka virtoaly na karazana infografika hafa.
Viz Virtual Studio mifangaro amin'ny mpamatsy fanarahan-dia, izay ahafahana manovaova tanteraka ny fampiasana sary namboarina tamin'ny tontolo iainana. Midika izany fa azo ampiasaina amin'ny tontolo ivelan'ny tontolo ny sary namboarin'i Viz Virtual Studio, ary miaraka amin'ny fitomboan'ny vokatra an-kalamanjana (fandrakofam-pifidianana sy famokarana fanatanjahantena mivantana), dia azo atao amin'ny mora ihany toy ny amin'ny studio.
Viz Virtual Studio manova ny angon-drakitra manara-penitra izay avy amin'ny rafitra fanaraha-maso mekanika na sary miorina na fitambaran'izy roa. Dia mamadika izany amin'ny data data fakantsary izay mety ampiasain'ny Viz Engine. Viz Virtual Studio mizara ny vaovao momba ny fanenjehana amin'ny maro Vizeri Viz ary ahitana fangalarana failover ho an'ny be loatra Viz Virtual Studio fanamboarana ary koa ny fotoanany manokana ho an'ny rafitra izay mety tsy mandeha amin'ny sink.
Ny lafiny mampiavaka an'ny Virtual Virtual Studio dia ahitana:
3D virtoaly set
Intuitive interface tsara
manohana HD & UHD
Fanalahidin'ny chroma namboarina
Taratry ny talenta
Loza plug-in be
Fampidirana efitrano fandraisam-baovao
Vokatry ny fifantohana
Fanitsiana loko amin'ny loko
Fitaovana calibration fitaovana
Ny fifehezana sary an-tsary fahatelo
Co-cyc sy holdout matte
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Viz Virtual Studio dia mitsidika ny www.vizrt.com / vokatra / viz-virtoaly-Studio.
Nahoana no misafidy VizrtVahaolana Virtual Storytelling
Ny tantara dia efa lasa taloha ary ny mpamorona atiny rehetra dia manana tantara holazaina. Ho an'ireo mpampita vaovao, Vizrt afaka manampy kokoa amin'ny fiainana ny tantaran'izy ireo. Noho ny fivoaran'ny zava-misy marobe sy ny Virtual set, Virtz's Virtual Studio dia fitaovana tonga lafatra ho an'ireo mpampita onjam-peo mba hahatonga ny tantarany ho marina araka izay azo atao ho an'ny mpihaino azy.
Virtz dia orinasa tsy miankina manana mpiasa 700 eo ho eo, miasa amina birao 30 manerana izao tontolo izao. Vao haingana ny orinasa dia nahazo ny orinasa mivantana-vahaolana video-namboarina vita tamin'ny rindrambaiko IP, NewTek. Vizrt an'ny Vola famaranana ao Nordic VIII.
Raha mila fanazavana fanampiny momba Virtz sy ny tantara notononiny, tsidiho ny www.vizrt.com /.
fampitana fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa Content Creator Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor rafitra fanaraha-maso mifototra amin'ny sary fampidirana mpamorona votoaty media NewTek Vola famaranana ao Nordic VIII vahaolana miorina amin'ny rindrambaiko Telo sy zana-tsipìka automation studio Ultra HD Forum Video injeniera Virtual Studio tantara an-tsary Viz Virtual Studio Vizrt 2020-05-05
Previous: Ny Bee Mena dia mitaky ny fandefasana Playout ho an'ny TVC TV and Arabic TV Channels
Next: Fivoriana fampandrenesam-panatanjahantena am-pahalalana amin'ny alàlan'ny Audio Audio miaraka amin'ny Studio Technologies